Kubva mubhuku rinonzi The cashless kumukira. Mazuva ano pfungwa, pfungwa akasimuka kuti ruzhinji cashless kutenga muna 1949.
Kare chaiko mari rinoshandiswa zvimwe zvinhu kuti mari. Shell akashandisa akadai mari mu Polynesia. Mimwe mienzaniso "mari" Matombo, minhenga, nezvikorekedzo hove uye kunyange zvipfuwo.
Kunyange muIjipiti yekare uye hweRoma akashandisa cashless kubhadhara Somuenzaniso, panguva spannmålsköp. The kambani Western Union rakaumbwa muna US muguta Rochester muNew York State. Rine midzi yawo shure 1851 apo rainzi Mississippi Printing Telegraph Company. Western Union ave achinyanya vakashanda pamwe kuti vakatumira mari uye neteregiramu pose. A worudzii makadhi okutanga vaitova 1890 remakore muEurope. 1914 vakatanga Western Union pamwe cashless kutenga vane kadhi raigona kushandiswa mune zveefa vakabvuma.
The chaiko makadhi dzakatangira remakore rechi20, United States rakapa nemakambani dzakadaro mafuta uye ngetani muhotera. Chimwe chiri kuita kuti kukura kushandisa makadhi vakura izvi ikawanda Motoring apo makambani mafuta akatanga nyaya makadhi. Department zvitoro akatanga panguva gumi ichi kubudisa kworudzii kuzivikanwa zviratidzo kuti vatengi uyo vaitengerana nechikwereti. Kunyange zvazvo dhipatimendi chitoro NK anoshandiswa emakore asati chaiko makadhi dzendarira zviratidzo. Sweden yokutanga "kadhi" Naizvozvo vanonzi-kadhi NK ari raingova vakaverengwa mässingspollett. Munguva 60s vakapa NK ari oga makadhi ari ano pfungwa US womuenzaniso.
McNamara akazivawo kuti akanga asina pamwe chikwama wake kubhadhara kudya. By kunyora siginicha yake bhizimisi kadhi akapa resitorendi aigona kuva bhiri papera akapfuura. Maererano vakawanda pfungwa aikurukura zviviri izvi kuti McNamara aiva pfungwa chii aizova chaiko kadhi rokubhengi. Muna 1950 akatanga kambani Diners Club pamwe gweta ake Schneider.
Kambani akava murevereri pakati vatengi uye mapoka vakatenga kubva. Pazuva rokutanga makadhi akanyorwa mazita muripo masangano 'neSvondo. Makadhi anoshandiswa zvizhinji muridzi wengoma nokuda kwokuripirwa kudya. Diners Club makadhi vakanga pakutanga akamurairawo makadhi izvo zvaireva kuti akabhadhara zvose nechikwereti pamwedzi.
Bloomingdale akanga kwenguva wokugara naye kambani. Zvikasadaro, akanga kupfuura yakakurumbira mugari wenhaka kuti dhipatimendi chitoro Bloomingdale uye ayo akaipa förhållade pamwe Photo womuenzaniso Vicki Morgan. Mumwe munhu anokosha Diners Club munhoroondo Matty Simmons. Simmons aiva panguva dzezvakaipa purezidhendi Diners Club asi chinonyanya wakakurumbira ave terevhizheni uye firimu mugadziri.
The American cashless snowball yakanga zvino rinopfungaira uye vacho vakakura uye vakakura ose gore. Mumwe danho rakanga apo yokutanga pamahombekombe rakapa debit kadhi rakatanga wakabudiswa muna 1951 maererano Franklin National Bank of Long Island. Nokukurumidza, Diners Club makwikwi uye zvakawanda makambani aya akura guru echikwereti hofori.
American Express uye Wells Fargo
American Express rakaumbwa muna 1850 muna Buffalo aite aiva tsamba basa. Gare gare kuwedzerwa chete mari transports uye mabasa yebasa. Henry Wells akatanga American Express pamwe William Fargo uye John Butterfield. vatakuri zvitatu akabatanidza imwe. Mukupera rechi50 remakore, dzakatanga kadhi kuvhiyiwa kukwikwidzana Diners Club. The kambani vaivawo tentacles yaro paterevhizheni nyika. American Express ane muzinda wayo mukuvaka siyana mu New York.
A nguva American Express rakaumbwa zvino Wells Fargo vanhu vane zita iroro. Wells Fargo akazoonana ainzi imwe mabhanga chikuru munyika yose. American Express uye Wells Fargo kare ari zvakanyatsobatana zvokuti zvakaoma kusiyanisa. Sezvo American Express vatanga kadhi yaro yokutanga muna 1958 sezvo akasuma uyewo nokuda chikwereti. Hazvina kunyanya vanamuzvinabhizimisi vanga vachishandisa American Express makadhi. American Express achangobva tichishanda guru chitoro cheni Walmart naro mumwe anopa akabudisa prepaid kadhi Bluebird Prepaid Card.
American Express anofunga pacharo kuti saka chete kuti havasi pakubata zvakananga mashoko kubva makadhi zvikuru yaidhura pamwe kumusika. Vatengi vanoonekwa zvikuru kuva nhengo imwe chete kirabhu.
The muchiuto rinotova nowenyika imwe Masonic dzichagara pane bhizimisi. The kambani Rinorongawo oddest kutenga uye mabasa kuti vatengi. The Magadzirirwo yakati zvakafananidzirwa Rolls-Royce mishonga makasitoma avo. Asi Makadhi kwoumbozha chitarisiko haafaniri kuenzaniswa motokari. Asi vari "wekare zvakaora trolley nendove." Zvinoitika nguva nenguva mubhuku. Kuvavenga kadhi unowana uropi munyori kuti chinja kubva pfungwa kuti mheni rekusuwa.
The zvakawanda chete neshanduro American Express makadhi kunge "kukurumbire kadhi" rakashandiswa nezvose kubva Elvis kuna Zlatan. Vamwe rappers vakatorwa mashoko nokuda kadhi rake anodiwa zvakanyorwa. Bhuku rino pamwe akaita kare apa pfungwa yokuva inongova chokwadi. It rakazara nenharo pamusoro makadhi nezvimwe cashless. Asi bhuku iri uyewo "hatbok" vakananga cashless uye chaizvoizvo (nokutaura Zlatan) rakanyorwa chitambe kupenga munyori.
Asi kuvenga Anotsigirwa chokwadi. Dyngkärran kumusoro, zvisinei, waiva kunze yakakonzerwa kwakanga kwatangwa synapsfyrverkeri. Kungofanana pakurwisa akadai mwana zvinonyadzisira uye rusaruraganda nyore anova pachavo nokuda kunzwa hasha uye kusemeswa sezvo uyewo matambudziko kunhivi bhuku racho nyaya vava pachavo kuti munyori. Pane kunge private dzose nguva.
Makambani ari chakaipa mupfungwa. Pane zvishoma kambani kuti anotengesa kadhi marezinesi. Nhoroondo Mastercard vepakutanga unesungano maviri masangano rwezvemabhengi kuti makadhi. Interbank uye WSBA. It akasika chirongwa kuti kadhi rinonzi Master Charge. Master Charge akazoonana zita rokuti Mastercard. Kutanga kwayo dzakabudirira kuva kadhi kambani yose yaiva kubatsirana pakati Tenzi Charge uye Mexican bhengi Banco kansallinen. A zvakadzama nyaya yaiva pamutemo kurwisana akamuka pedyo Worthern Bank haabvumirwi abatane Master Charge. dzimbahwe Mastercard vaJehovha zvino muguta Purchase muNew York State.
A nguva vasati anoratidza vakagamuchira zita rayo iyezvino sezvo vakavapa zvavo kadhi kunzi Entrée. Chaiva debit kadhi kuti kwaiva nechokuita ipapo achangobva zvichiitika kombiyuta enyika kuti authentication unonzi BASE I uye BASE II. Runoenzanirana hurongwa Master Charge akadana INAS uye INET.
The zvikamu View zvaiva kunze United States vakatengeswa muna 1974 uye akava chikamu chezvinhu boka mabhanga anonzi IBANCO. Kambani ainzi National BankAmericard pakupedzisira kuna Visa USA. IBANCO zita pakupedzisira kuda Visa International. The no wekambani wacho kadhi yokutanga yaiva muguta Fresno, panguva chirongwa kwaJosefa Williams. Ipapo tsamba mune mamwe maguta muCalifornia. Basa chakanga chakakuvadzwa nguva dzose zvose kutsoropodzwa uye kubiridzira. 1970 vakachinja mazita ose dzinoratidza. Kudyidzana makadhi vakatanga mangwanani US nemabhangi vakasiya yavo kadhi maitiro uye akabatana kana Master Charge kana BankAmericard uyo zvino akazova Mastercard uye Visa.
View wakagamuchira 1987 atenderwa kutarisira yose chitoro pomumbure Interlink kuti makadhi nebhengi (chikuru richikurukura ichi mhando muUnited States). Ari '90s vatanga Smart Card Visa Cash kuti raigona akatakura mari vachishandisa ATMs. View akasunda kugadzira kubva rinobva mutsetse kuti Chip makadhi kusanganisira chinhu rinonzi Partner Program. In Manhattan, pemahombekombe Citibank uye Chase Manhattan mukupera 90s bvunzo kadhi raiva chose kubudirira. Kazhinji, vanhu mhosva kadhi chete kamwe. Kudyidzana pamwe Internet kutsvaka kambani Yahoo akatanga kusika kutenga peji imwe paIndaneti. Onawo akasvinudzwa zvikuru utkonkurerat pamwe Microsoft kuti vanhu vaigona kuita kwavo rwezvemabhengi kwema pakombiyuta yako. Ratidza ari makuru Fresno muCalifornia.
American Express uye Diners Club makadhi kupa pachavo kubva apo Visa uye Mastercard vasingadaro. Mukupera zvazvingava, anonyanya nhengo mabhanga zvinobuda makadhi. An musiyano unokosha pakati kadhi Makambani ndechokuti vamwe saka kutaura achiita pamahombekombe, nepo vamwe vasina. Visa uye Mastercard makadhi Data kutaurirana Network kwakasiyana zvazviri zvakasiyana chaizvo. Mastercard maitiro, rinonzi Banknet, Visa kuti VisaNet.
Saka Visa uye Mastercard zvinodzorwa ne nhengo mabhanga sezvo kadhi vanoshandisa dziri chokwadi chose mumaoko mabhanga aya. The makwikwi pakati Visa uye Mastercard vari kushanda vasiko nekuti mabhanga akawanda kuti tiri nhengo imwe sangano vari zvakare nhengo mumwe.
Discover uye Sears
Discover Financial Services kana chete pfupi Discover nderimwe kukuru US echikwereti makambani. It rakaumbwa muna 1985 kubudikidza weboka mari kambani Dean Witter uye vakava rutivi Sears.
Discover akava yakazvimirira kambani muna 2007. It anopa kadhi Discover Card. The hwokugadzira kadhi network inonzi Discover Network uye Pulse. Makuru Suburban Chicago. 2008 akatenga Discover ari Diners Club of zvemari boka Citigroup.
Sears, nemhembwe & Co. rakaumbwa muna 1886 by Richard Sears uye Arivha C. nemhembwe. Sears akava pamusoro nguva kusanganisira kupfuura US tsamba-hurongwa makambani. Sears kunewo chokuita skyscraper Sears Tower muna Chicago yava kunzi Willis Tower. The skyscraper izvo kwenguva yakanga yakareba kupfuura chivako kwenyika yakanga anazvo kusvikira 2004 ne Sears.
The cheki kungaita mavambo yavo kudzokera 1200s. Asi chaizvoizvo akashandisa akabvisa chete kana macheki vakatanga achishandiswa vendarama muEngland. Macheki vave munhau, dzimwe nguva aishandiswa mari. Muenzaniso uyu apo varwi vari 50s muHong Kong akashandisa macheki somunhu mari muripo. muzvinashawo ose akasaina cheki muna Chinese nomumwe kutengwa. Zvinogona kuitika kuti mumwe musoja Papera mwedzi yakati vakaona cheki raakange pachake akanga zvake.
Credit kadhi uye cheki kutoitwa rwezvemabhengi mazwi nenzira yakafanana. Nhoroondo pedhi anonyora cheki kuti chitsama izvo wacho anogona zvino kudzikinura mubhangi. Vachiongorora nyaya anogona kunzi (enzanisa makadhi). Mumwe akatsanangura achidzidzisa cheki se "nedhambakura kwakaita shanduro Bank kadhi". In kontantlöshetens pauduku akataura zvakawanda pamusoro cheki nekugadzirisa nzanga pamusoro cashless.
Munhu kare muna 60 remakore vurmade iyi cheki uye cashless umo John Diebold. Ake kubvunza boka Diebold Group akasika dzakawanda kombiyuta-inobva richikurukura Banks gumi ichi. Kufunga Diebold kwakaita kukanganiswa George Mitchell aiva mukuru chinzvimbo Federal Reserve (US Central Bank). Johani akaedza kupesvedzera US mabhanga kuti chinja kuti makombiyuta nehurongwa. It vaitaura kuti macheki aidhura, waiva chaizvo zvakafanana nhasi nharo kuti mari.
Kumavambo 90 yaiva muripo rechinomwe kuSweden kubudikidza dzaserera. Munguva 2000s, nhamba nemaziso 0.1 muzana. With saka nguva yapera Swedish mabhanga dzakawanda macheki. Hapana Swedish mabhanga akatadza chete dzokubhadharisa macheki. Zvadaro, kana mubhengi Swedish pakupedzisira akariita vakatevera vamwe kuti cheki uye kutapwa rakange rakanamwa kureba. Sezvo kuda kuti cheki kubiridzira imhosva yose United States asi kwete overdraw mbiri nhoroondo.
A vachitova mari munhoroondo
Kare chaiko mari rinoshandiswa zvimwe zvinhu kuti mari. Shell akashandisa akadai mari mu Polynesia. Mimwe mienzaniso "mari" Matombo, minhenga, nezvikorekedzo hove uye kunyange zvipfuwo. Pasina nguva Mari vane oddest muripo dzimwe nguva kushandiswa. Somuenzaniso, vakashandisa simbi sezvo mari iri Sparta nekuti vakanga kure kunze nyika.
Southwest mari akatanga kushandiswa munzvimbo dzokuAsia Minor muna 600 BC Near East oda chii isu shevedzai Middle East. Raiva lydiske Mambo Croesus uyo muna 500 BC akatanga dzava kugadzira mari sirivha nendarama. Ainziwo Croesus uye ayo shoko ane zvikuru mupfumi. Paiva kuperevedza zvinokosha simbi inoshandiswa zvikurukuru mhangura. Izvi zvakaitika, somuenzaniso, mangwanani muRoma. Panguva Viking Age vaitenga mari zvikuru kuna Sweden kubva Islamic nyika uye kubva kuEurope. Nokuti VaViking aiva ukoshi sirivha, saka kutaura mari. Saka, kunyange zvisingachashandi mari esirivha uye siyana zvinhu zvesirivha semuripo. Gare gare munyaya, paiva guru ndiro yemhangura kushandisirwa mari.
Yokutanga mari Swedish vakanga yakagadzirwa muna Sigtuna vakakomba gore 1000. Mukutanga 1500s akatanga kuverenga masendi. Kutanga nepakati 1800s vakatanga kuSweden kushandisa musoro mari (korona uye korona), iro yakakamurwa dzikava 100 masendi. Apo mumwe Sweden akasiya goridhe mureza muna 1931 akanyangarika musiyano chaiwo pakati mari uye zvikwereti. The yemandorokwati anorevei praktien pamusoro Banknotes dzaigona vakatsinhanisa nendarama vachibva kuchengeterwa goridhe. Izvi uye Banknotes zvavo kwaibva nevimbiso uye chivimbo nehurumende. A chivimbo nokuti mamiriro sezvo iye zvino havafaniri kuvimba. The zvemari kusaita zvinhu nomazvo kwakapararira zvikuru. Asi rutendo asi kuipa mari pane muranda ane unconscionable cashless vanhu izvo haafuridziri chero chivimbo zvachose.
Banknote nhoroondo uye kukura hunonyatsobatana kuti unyanzvi rokudhinda. Vakanga Pakutanga rudzi pakutengeserana kana chikwereti vasati vava chaiko mubhadharo. Banknotes tillverkads kutanga muna China panenge iyoyo sezvo mari chaiko vakatanga kuuya (600 BC). Ipapo vakatanga kushandisa Banknotes uchinonoka kupararira kubva China kuEurope kuMiddle Ages. Rakanga chaizvoizvo kuSweden uye mumwe ari 1600s kokutanga akapa zvakakodzera Banknotes mu Europe. Chokutanga, rakanyorwa Stockholms Banco, ipapo Kudenga signboards mubhangi uye pakupedzisira kuti Riksbank panguva pakuguma 1800s. Kwekutanga chakatsindirwa mamwe mabhanga kupfuura Riksbank pachake manotsi. Next kuna Sweden, England akaita akadhindwa Banknotes pa.
Numismatics - inofadza sayenzi chitandadzo
Vecka 24, måndag 14 juni 2021 kl. 06:42